RAR Isixhobo sokulungisa. RAR Ukubuyisela isoftware. Ukulungisa RAR Iifayile.
DataNumen RAR Repair Ingaba i eyona RAR isixhobo sokulungisa kunye nokubuyisela kwimeko yesiqhelo kwihlabathi. Inokulungisa urhwaphilizo RAR Oovimba abagcina kuvimba kunye nokubuyisa idatha yakho kangangoko kunokwenzeka, ngaloo ndlela kuncitshiswa ilahleko kurhwaphilizo lwefayile.
4.90 / 5 (ukusuka kwiivoti ezili-1,600)
Ngoba DataNumen RAR Repair?
Inqanaba lokubuyisela kwimeko yesiqhelo yimost Inqobo ebalulekileyo ye RAR imveliso kwakhona. Ngokusekwe kuvavanyo lwethu olubanzi, DataNumen RAR Repair unelona zinga lifanelekileyo lokuchacha, ibhetele kakhulu kunayo nayiphi na enye into okhuphisana nayo, kubandakanya u-WinRAR kunye nezinye RAR izixhobo zokulungisa, emarikeni!
Funda ngakumbi malunga nendlela DataNumen RAR Repair utshaya ukhuphiswano
Khange ndibenangxaki ngale nkqubo ibalaseleyo. Ilizwi kwabo bantu abanokuba neengxaki ezithile. Ukuba i-'DataNemen Rar Inkqubo yokulungisa
Nge-6 kaSeptemba 2014
Ndingavuya kakhulu kukushiya ukubuyela umva ngokubhekisele kuthethathethwano oluqinisekileyo lwemveliso yakho _ ezinye iingcebiso malunga nokusilela kwe
Iimpawu eziphambili kwi DataNumen RAR Repair v3.5
Inkxaso yokulungisa zonke iinguqulelo ze RAR kunye neefayile ze-SFX.
Inkxaso yokufumana kwakhona ivolumu eninzi kunye novimba oqinileyo.
Inkxaso yokufumana kwakhona ugcino olufihliweyo ngegama lokugqitha
Inkxaso yokufumana nokukhetha ifayile ye RAR noovimba beSFX abazakulungiswa kwikhompyuter yalapha.
Inkxaso yokulungisa RAR iifayile kwimithombo yeendaba eyonakeleyo, njengediski yefloppy, Zip Iidiski, iiCDROM, njl.
Inkxaso yokulungisa ibatch ye RAR kunye neefayile ze-SFX.
Inkxaso yokulungisa RAR Oovimba abagcina kuvimba njenge-8, 388, 608 TB (okt 8, 589, 934, 592 GB).
Ukudityaniswa kwenkxaso kunye neWindows Explorer, ke unokulungisa RAR yogcino kunye nemenyu yomxholo yeWindows Explorer ngokulula.
usebenzisa DataNumen RAR Repair Ukufumana kwakhona ukonakala RAR Archive
Xa akho RAR Ugcino lonakele okanye lonakele ngenxa yezizathu ezahlukeneyo kwaye awunakho ukuyivula ngesiqhelo, ungasebenzisa DataNumen RAR Repair ukuskena ifayile ye RAR yogcino kwaye ubuyisele iifayile ngaphakathi kuyo kangangoko kunokwenzeka.
Phawula: Ngaphambi kokufumana kwakhona ukonakala okanye ukonakala RAR yogcino kunye DataNumen RAR Repair, ndicela uvale WinRAR kunye nazo naziphi na ezinye iinkqubo ezinokufikelela kwifayile ye- RAR yogcino.
Khetha eyonakeleyo okanye eyonakeleyo RAR uvimba oza kulungiswa:
Ungafaka igalelo RAR eligcina igama ngokuthe ngqo okanye ucofe i
iqhosha lokukhangela kwaye ukhethe indawo yokugcina. Unokucofa kwakhona
iqhosha lokufumana RAR Indawo yokugcina eza kulungiswa kwikhompyuter yendawo.
Ngokuzenzekela, DataNumen RAR Repair iya kuphinda ikhuphe kwaye ikhuphe iifayile kwifayile ye- RAR Ugcino kwindawo yokugcina ebizwa ngokuba yi-xxxx_recovered, apho i-xxxx ligama lomthombo RAR yogcino. Umzekelo, kumthombo RAR yokugcina eyonakeleyo.rar, isikhombisi esivelisayo sokukhuphela siya konakaliswa-kufunyanwa. Ukuba ufuna ukusebenzisa elinye igama, nceda ukhethe okanye usete ngokufanelekileyo:
Ungafaka igama lesikhombisi ngqo okanye ucofe i
ukukhangela kwaye ukhethe isikhombisi.
iqhosha, kwaye DataNumen RAR Repair Ndiza start ukuskena nokulungisa imvelaphi RAR ifayile. Inkqubela phambili yebha
Emva kwenkqubo yokulungisa, ukuba ngaba umthombo RAR ifayile inokulungiswa ngempumelelo, uya kubona ibhokisi yemiyalezo enje:
Ngoku ungavula ulawulo lwemveliso oluchaziweyo kwinyathelo lesi-3 kwaye ujonge iifayile ezibuyisiweyo kulo.
DataNumen RAR Repair 3.5 ikhutshwa ngoMeyi 3, 2021
DataNumen RAR Repair 3.2 ikhutshwa nge-18 kaDisemba, 2020
DataNumen RAR Repair 3.0 ikhutshwa nge-4 kaNovemba ngo-2020
DataNumen RAR Repair 2.9 ikhutshwa nge-9 kaSeptemba, 2020
Ukuphucula ukwenziwa kwetemporary iifayile.
DataNumen RAR Repair 2.8 ikhutshwa nge-19 ka-Epreli 2020
Ukuphucula ukuchaneka kokubuyisela kunye nokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
DataNumen RAR Repair 2.7 ikhutshwa nge-18 kaNovemba ngo-2019
DataNumen RAR Repair 2.6 ikhutshwa nge-24 kaJulayi, 2019
DataNumen RAR Repair 2.5 ikhutshwa nge-28 kaJuni, 2018
DataNumen RAR Repair 2.3 ikhutshwa nge-20 ka-Epreli 2018
Ukuphucula ukubuyiswa okubhaliweyo RAR oovimba.
DataNumen RAR Repair 2.2 ikhutshwa nge-Sep 19, 2016
DataNumen RAR Repair 2.1 ikhutshwa nge-14 Septemba 2013
DataNumen RAR Repair 2.0 ikhutshwa ngoJulayi 6, 2013
Inkxaso WinRAR I-v5.x.
Phinda ubhale umsebenzisi.
DataNumen RAR Repair 1.2 ikhutshwa nge-Sep 27, 2006
Inkxaso yokufaka inkohliso RAR okanye ugcino lweSFX kwiseva yethu ye ftp.
Inkxaso yokufumana kwakhona izikhombisi kwi RAR oovimba.
Ukuphucula indlela yokubuyisela impazamo.